Ireo teboka tokony homarihina alohan'ny hividianana fakantsary nofon-doha - OMG Solutions
Man Down System - Solon-tena ho an'ny mpiasa
BWC011 & BWC058 - Solosaina mpamily & mpamorona tokana v2020-0623
Hevi-dehibe homarihina alohan'ny fividianana fakantsary valahana
Ireo fakan-tsary vita amin'ny vatana (BWC) dia tonga tato anatin'ny fotoana fohy avy amin'ny firaketana fakan-tsary tsotra fotsiny amin'ny fakan-tsary izay manome kalitao sy fihenan-peo mampiavaka azy. Raha ny fahitana ny fokonolona, ​​ireo fakantsary manana vatana dia mampitombo ny fandraisana andraikitra ary mangarahara ataon'ny polisy sy ireo mpiambina. Ny fitondran'ny mpiasa sy ny fihetsiky ny mpiasan'ny mpiasa dia mihatsara amin'ny alàlan'ny fampidirana tsotra amin'ny fakantsary miendrika vatana ho an'ny fitaovana. Toy izany koa ho an'ny mpikambana ao amin'ny vondron'olona; ny fitarainana sy ny fihetsika tsy manafintohina amin'ny polisy sy ny mpiambina dia mihena be amin'ny tontolo izay misy fatin'olona iray.
Ny karazana fakan-tsary azo alaina eny an-tsena dia mety hisafidy ilay tsara mampikorontana. Tokony ho fantatry ny mpanjifa aloha hoe inona no takian'izy ireo. Takian'izy ireo ny BWC ho an'ny mpivarotra fifamoivoizana, mpiasa irery, mpiambina, mpiambina ny fonja, ary mpiasa vonjy maika toy ny olona mpamono afo na paramedika. Koa satria ny fakana sary bodycam dia azo ampiasaina ho porofo mandritra ny fitsaràn'ny fitsarana, ny orinasa dia tsy maintsy manamarina fa ny vokatra azony dia manaraka ny fepetra samihafa mifandraika amin'ny tsy fivadihan'ny porofo nomerika. Maromaro ny endri-javatra mahazatra hiantohana ny fahamarinan'ny angona. Ny haavon'ny fahazoan-dàlana samihafa dia miantoka fa ny polisy mitafy ny fakantsary dia tsy misy fomba hametahana ilay horonantsary, mamafa, na fanovana izany.
ohatra, eo amin'ny fitantanana ny fanarahan-dalàna OMG, Secure Mini Body Worn Camera miaraka amin'ny Encryption [Miaraka amin'ny LCD LCD] (BWC060) manana lisitry ny fanomezan-dàlana:
Ny mpampiasa dia mamela ny fandraisam-peo ary miaina hiaina fotsiny, fa tsy misy famongorana rakitra na fidirana amin'ireo rakitra voarakitra
Entina miohatra indroa miaraka amin'ny AES256 sy RSA2048. Tsy ho afaka hiditra ireo horonantsary ny daholobe na dia nanapaka ny fakantsary aza izy ireo. Ireo mpampiasa manana RSA Private Key ihany no afaka mijery ireo sary ireo
Ireto misy teboka lehibe indrindra tokony hadino alohan'ny hividianana fakantsary vita amin'ny vatana.
Fampiasana mora foana
Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana dia misy fampitaovana alohan'ny fandraisam-peo sy bokotra tokana iray izay manome azy ireo tsara indrindra hampiasaina nefa eo amin'ny sehatra ny manamboninahitra. Tokony ho afaka mampihetsika haingana ny cam amin'ny tompon'andraikitra ny manampahefana raha misy maika. Ny fitaovana koa dia tokony avelan'ny mpampiasa hitantana sy hitahiry ireo horonan-tsary miaraka am-pahamendrehana satria matetika dia mandany fotoana izany.
Azo itokisana sy fiaretana
Ny fakantsary mavesatra tsy ilaina dia mety hisy fiantraikany amin'ny fampandehanana ny filaminana ary manakana azy ireo tsy hanao ny asany. Eny, tian'izy ireo ho mavesatra sy maharitra ny mpikirakira azy fa ny lanjan'ny be loatra kosa dia mety ho enta-mavesatra amin'ny tsipika. Toy ny fakan-tsary miady amin'ny herin'ny maizina WIFI Law, izay video 1728 * 1296 30fps, H.264, fahitana 940NM alina (BWC052) dia afaka mipetaka mora foana amin'ny paosina na eo alohan'ny lobaka ny fandraisam-peo isaky ny fotoana imasom-bahoaka.
Ny fitantanana ireo angon-drakitra noraketin'ny fakantsary dia tena zava-dehibe. Satria lehibe ny haben'ny fandingana sary; zava-dehibe ny famerenana sy fitehirizana angon-drakitra dia tokony ho mora sy tantanana. Ny mpiambina ny sisin'ny filaminana sy ny fampiharana ny lalàna dia miankina amin'ny horonantsary mba hanaporofoana fa tsy nilaina na nosamborin'ireo olona nanao heloka. Noho izany antony izany dia mila fitaovana izay mora ampiasaina izy io, azo itokisana ary azo antoka. Ny vokatra avy aminay dia manana karatra SD fitahirizana anatiny ho an'ny fitahirizana angon-drakitra lehibe sy toeram-pivarotana 20 fitehirizana data sy recharge.
Habe sy fampiononana
Ny lanja dia singa iray lehibe rehefa mionona sy ny habeny. Ny maivana kokoa ilay fitaovana, ny tsara kokoa ho an'izay mitafy azy. Na dia tsy maintsy mandanjalanja ny lanjan'ny hasina sy ny habe ary ny fiambenana ilay mpampiasa. Ny masoivoho fiarovana dia tsy te hividy fakan-tsary mijanona mora ary ny fitaovana dia tokony hanana ny fitaovana sy ny rindrambaiko ilaina takiana amin'ny filan'izy ireo.
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny Headset Body Worn Camera izay mampihatra lalàna (BWC056) izay aseho an-tsary dia hitafy mora foana ho an'ireo izay te-mirakitra an-tsoratra ny laharam-piainana isan'andro, ny manampahefana mpiambina dia afaka mametraka mora foana amin'ny loha. Izy io dia maivana, portable, tanana tsy azo itokisana miaraka amin'ny fakan-tsary mini-mora azo, mora ampiasaina
1080P Recording tanteraka HD
Bluetooth miantso sy mozika
Fifandraisana WIFI sy fifehezana APP
Mety amin'ny tranga isan-karazany toy ny zavakanto dite, sary hosodoko, fandrahoana sakafo, fanjonoana, fanandramana simika, sns sns Manohana ny karatra max 64GB TF hameno ny fangatahanao.
Fiadiana amin'ny toetr'andro
Ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia mora iharan-doza avy amin'ny anton-javatra manodidina ny tontolo iainana. Ny cam cam de police dia tokony hiatrika ny toetr'andro mavesatra sy ny tontolo iainana eo amin'ny faritra iasan'izy ireo. Ny orana, ny oram-panala sy ny toetrandro hafa dia mety hisy fiantraikany amin'ny kalitao an-tsoratra, noho izany dia tena ilaina ny mividy horonantsary rakitsary izay miasa tsara na inona na inona toe-javatra. Ny fakantsary mpiasan'ny polisy (BWC004) manana lens lens optika 6G, famoahana horonantsary FHD marina, ary IP67 tsy azo tanterahina miaraka amin'ny zoro 140 afaka miasa amin'ny orana, ranomandry sy toetrandro hafa.
Ny ainin'ny bateria BWC dia tokony avelan'ny fakan-tsary hiasa mandritra ny fiovana iray manontolo fa tsy voatery ho voaverina indray. Tsy mandeha tsy mandeha intsony ny fakantsary fa aleo solosaina io polisy io fa arakin'ny politikan'ny polisy. Raha ny salanisa, mpiandraikitra iray dia mirakitra adiny roa ka hatramin'ny telo ora mandritra ny valo ora. Ny fihodinana folo- hatramin'ny 12 ora dia mitaky aina bateria lava kokoa, ny vokatra vokarintsika mandritra ny ora maro an'ny 16.
Ny sehatry ny fomba fijerin'ny BWC dia eo anelanelan'ny mari-pahaizana 90 sy 130. Ny mason-tsivana mivelatra kokoa dia mety hisintona toe-javatra manokana, ary manome fampahalalana bebe kokoa noho ny filana. Ny mason-tsofina mivelatra kokoa dia mety hitahiry sary toy izany izay tsy hitan'ny manamboninahitra Mini HD Body Worn Police Camera, 12MP OV2710 140 Degree Camera, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Long Time Work (BWC053) izay mari-pahaizana ambany. mihoatra ny fakan-tsary mahazatra ary manome sary lehibe kokoa.
Ny asan'ny mpampihatra lalàna dia manao ny andraikiny andro aman'alina; koa mila fahitana amin'ny alina izy ireo. Na dia misy safidy hafa amin'ny fahitana amin'ny alina aza ny BWC dia misy ny tsy fahampian'ny haavony ary tsy zakan'ny toetrandro toetrandro Mini Camera, 1296p, 170Deg, Ora 12, GPS, Night Visual (BWC010) ary rano mifanentana amin'ny toetr'andro rehetra.
Ireo mpampiasa matetika dia mampiasa fakantsary vatana ho an'ny fiarovana dia tsy maintsy mila rafitra docking izy ireo. Nivoatra ity teknôlôjia ity mba hahafahan'ny mampiditra horonantsary an-tsaha, ny ankamaroan'ny BWC dia tonga toy ny rafitra izay misy “fiantsonana fandihizana” miaraka. Ny toeram-piantsonan-drindrina dia mametraka ny unit BWC, ary ny rafitra avo lenta koa dia mamindra na mampiditra rakipeo nomerika amin'ireo mpizara na fitahirizana rahona. Ho an'ny ankamaroan'ny modely BWC dia manisy toerana an-tariby ao amin'ny efitrano fanaovana dokambarotra ny manampahefana iray rehefa miverina any amin'ny departemanta izy ireo rehefa vita ny fanovana. Raha tsy voakilasy na nasiana marika ireo horonan-tsary, dia afaka manao izany ny manampahefana na mpikambana hafa ao amin'ny sampana amin'io fotoana io. Izahay dia manome seranan-tsambo 8, seranan-tsambo 10, seranan-tsambo 12, seranana 20 ary koa seranan-tsambo 8 seranan-tsambo misy efitrano fandefasana amin'ny mpanjifanay.
Ny fikarohana sasany dia manome paikady telo mampiharihary ny horonantsary.
Paikady telo hanamafisana ny fangaraharana fakan-tsary amin'ny vatana
Ny mpitantana ny polisy dia tokony hiantoka ny fitanisan'ireo manamboninahitra ny politikany ao amin'ny departemanta momba ny fampahavitrihana ny fakantsary sy ny fampiasana. Ny ankamaroan'ny departemanta dia mandidy fa ireo manampahefana dia manetsika ny fakantsarin'ny vatany mandritra ny fihaonany amin'ny vahoaka. Saingy ambany dia ambany ny tahan'ny fanarahan-dalàna, ka misy mpiandraikitra sasany mandrindra ny fakantsariny ao anatin'ny 2 isan-jaton'ny tranga. Raha ny teknolojia vaovao dia mety hanatsarana ny fanarahana ny polisy toy ny fakan-tsary izay mandeha ho azy rehefa alefa ny antso, na ny fitaovam-piadiana enti-miasa dia tokony hanao asa tsaratsara kokoa amin'ny fanarahana ny fanarahan-dalàna sy ny fiatrehana azy ireo rehefa tsy manaraka ny protocole ny manamboninahitra.
Tsy maintsy ampandre ny olona izay ifandraisany ny tompon'andraikitra rehefa mirakitra ireo fakantsary vatany. Any amin'ny departemantan'ny polisy marobe, ny soso-kevitra dia manome soso-kevitra fa tsy mibaiko ny manambara ireo mambran'ny vondron'olona ao amin'ny vondrom-piarahamonina rehefa misy ny fakana ny fakantsariny sy ny fandraisam-peo. Vokatr'izany dia vitsy ny olona mahalala ny fakantsary mandritra ny fihaonany amin'ny polisy.
Ny departemanta dia tokony hiasa haingana araka izay azo atao mba hanafahana ny fakantsary fakan-tsary amin'ny tranga avo lenta sy tranga hafa rehefa fangatahana. Any amin'ny ankamaroan'ny fanjakana, azon'ny besinimaro miditra amin'ny alàlan'ny fangatahana rakitra misokatra. Fa io dingana io dia mety hahemotra rehefa ny fizarana amin'ny sehatra dia eo amina famotorana mitohy na rehefa misy antsipirihany (toa ny tarehy, takelaka fahazoan-dàlana na fampahalalana manokana) izay tsy maintsy averina alohan'ny famoahana azy.
Ny fakantsary azo ampiasaina dia manatevin-daharana ireo haitao maro izay hanampy ireo mpiasa vonjy maika hahomby amin'ny fomba mahomby sy azo antoka. Ankehitriny rehefa avy manadihady ny fakantsary momba ny fakan-tsary amin'ny vatana sy ny fotodrafitr'izy ireo manohana azy dia mora kokoa ny mandray ireo fitaovana vaovao sy ireo fahaiza-mifampiresaka ary manitatra azy ireo amin'ny mpiasa bebe kokoa amin'ny ho avy.
Mamirapiratra, PC f., Nd [Online]
Hita amin'ny: https://pceinc.org/wp-content/uploads/2018/03/20180301-Police-Body-Worn-Cameras_What-Prosecutors-Need-to-Know-White-and-Case-and-PCE.pdf
Gogol, I., 2016 / 01 / 18. asmag.com. [Online]
Hita amin'ny: https://www.asmag.com/showpost/19727.aspx
FANAZAVANA, E., nd [Online]
Hita amin'ny: https://www.nccpsafety.org/assets/files/library/Handbook_for_Public_Safety_Officials-_Body_Camera_Program.pdf
Peterson, B., May 29, 2018. INDRINDRA URBAN. [Online]
Hita amin'ny: https://www.urban.org/urban-wire/three-ways-police-can-use-body-cameras-build-community-trust
Vokatra, nd Fanamafisana lalàna OMG - fakan-tsary miakanjo vatana (DVR / WIFI / 3G / 4G) / fitantanana Digital-porofo - Singapore. [Online]
Hita amin'ny: https://omg-solutions.com/body-worn-camera/
Security, R., nd Ny fiarovana amin'ny valisoa. [Online]
Hita amin'ny: https://www.rewiresecurity.co.uk/blog/body-worn-camera-cctv-security
Hevi-dehibe homarihina alohan'ny fividianana fakantsary valahana no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin
↳ BWC011 - OMG WIFI / GPS / 4G Camera (fantsom-pifandraisana mafana)
↳ BWC101 - WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G Bluetooth Walkie Talkie miaraka amin'ny fakantsary radio roa